မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ internet network ပုံစံ ပြောပြပေးပါဗ — MYSTERY ZILLION
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ internet network ပုံစံ ပြောပြပေးပါဗ
May 2009 edited August 2010 in Networking
မြန်မာနိုင်ငံမှာ isp ဘယ်နှစ်ခု....
Isp နဲ့ client တွေ ဘယ်လို ချိုတ်ကြတာ...
မြန်မာ isp ရဲ့ ip address....
client တွေကို ip address ဘယ်လို ခွဲ ပေးတယ်ဆိုတာ.......
နိုင်ငံတော် ရဲ့ Network Plan ကြီးတောင် ပေးရတော့ မလိုလိုပဲဗျ။ သိသလောက်တော့ ပြောပြမယ်ဗျာ။ ဟန်သာဝတီ ဂိတ်ဝေး ကနေ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို ဖြန့်ချီတယ်ဆိုရမှာပေါ့။ Local ISP တွေ ကတော့ MPT, MTP(ယခင် ပုဂံ) နှစ်ခုထဲသာရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Local ISP တွေ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ခြေရှိကြောင်းလဲ သတင်းရရှိထားပါတယ်။
ဟံသာဝတီ ဂိတ်ဝေး အကြောင်းလေး ...ကျေးဇူး ပုပြီး.....
မြန်မာ နိိုင်ငံရဲ့ internet network ချိတ်ဆက်ထားပုံ ပုံ ကြမ်းကလေးများ ရှိကြပါသလားဗျာ....
အဲ့ဒါသာ အကုန်ရရင် လေ info တို့ မြန်မာပြည်ကြီးကိုရောင်းတောင် စားပြီးနေလောက်ပြီဗျ။ ဟီးဟီး ရှိတဲ့ သူတွေ က လဲ ဘယ်တော့မှ ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။
ဟန်သာဝတီဂိတ်ဝေးမှာ download speed 1.6 MB/s ရှိပါကြောင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက်သူ ကိုစေတန် ရဲ့ ပြောပြချက်အရသိရပါသည်။
ဟံသာဝတီ မြို့ မှာလား...?
လုပ်တော့မယ် ရန်ကုန်မြို့ ဟန်သာဝတီအဝိုင်းကြီးနားမှာပေါ့ဗျ။ ems ရုံးနားမှာလေ။ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာနပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟံသာသတီ ဂိတ်ဝေး က internet နဲ့ ဘယ်လုချိတ်ထားတာလဲဗျ....
*ဘာကိုသုံးပြီး ဘယ်နဲ့ ချိတ်ထားတာလဲဗျာ
ဘာကိုသုံးပြီး ဘယ်နဲ့ ချိတ်ထားတာလဲဗျ
ကိုစည်သူရေ.. အထက်မြန်မာပြည်မှာ.. ရတာနာပုံ ဆိုဒ်ဘာစီးတီးကရော.. အဲဒီ ဂိတ်ပေါက်.. အဲ..(ေ၀း)က နေမှ တဆင့်ယူပြီးပြန်ပေးမှာ လား မသိဘူးနော်.... Mpt ကို လည်း သူက ပဲ ကိုင်တော့မယ် ပြောနေသံကြားလို့နော်.. သိရင်ပြောပါအုံးဗျာ...
ဒါတော့ သေသေခြာခြာ မသိဘူးဗျ သိတဲ့ သူတွေ ဖြေပေးကြပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ က မန္တလေး ကဆိုတော့ ရတာနာပုံ...ဆိုဒ်ဘာစီးတီးကို အားကိုးရမယ်ထင်တယ်.နော်.. အဲဒီအကြောင်းလေးလည်း.. ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးဗျာ..
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ internet network ပုံစံကို သိတဲ့သူတွေတော့ ရှိမှာပါ။ ပြောပြကြပါလားဗျာ။
အားတော့ အားကိုးချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အားမကိုးရဲဘူး။ ကျွန်တော် တစ်ခုခုသတင်းတွေ ကြားတိုင်း ဖိုးသူတော်ကြီး တီးတဲ့ ကြေးစေကြီးကို သတိရတယ်ဗျာ။ မထင်........... မထင်........... နဲ့ လေ။
Preson break ထဲ က..မိုက်ကယ်စကီးဖီးလ်..အားကျပြီ...
ကိုယ်မှာ..ထိုးမလို ့လား ဟင် :39::39::39::39::39:
ဘာ့အတွက်လဲ ဘာ့ကြောင့်လဲ (ဖြူဖြူကျော်သိန်း သီချင်းကို ပြောတာပါ...:d:d:d)
အကြံအစီရှိလို့လား... ဖျာပုံနားက fiber ကဘာလုပ်လဲတော့ မသိဘူး.. သတင်းစာထဲမှာတော့
indian fiber, china fiber ဆိုပြီး လုပ်ပြီးပြီးလို့ပြောတာဘဲလေ..:39:
သေချာတာက MPT and MTP ဟာ seperate ISP ဖြစ်တယ်.. Red link က MTP မှာဘဲ လုပ်ထားတယ်ထင်တယ်.. ဟံသာ၀တီက ထွက်တယ်.. ဟံသာ၀တီ Gateway က ဖျာပုံကထွက် တယ်... ရတနာပုံက india and china ထွက်တယ်.. MTP front proxy က တခြားမှာပါ..
ဒီမှာက ဟန်ပြပါ.. :71::71: ဖော်ကြည့်တာနော်..... စိတ်မဆိုးကြေး.....:68::68:
Mpt ဂြိုလ်တုဆက်ကြောင်းကတော့ တိုးကြောင်ကလေး အိတ်ချိန်းကထွက်ပါတယ်
ဖျာပုံနားက fiber ကဘာလုပ်လဲတော့ မသိဘူး.. သတင်းစာထဲမှာတော့
ဖျာပုံ ဆိုလို့စိတ်၀င်စားလို ့..ကျွန်တော် က အဲဒီ နားမှာ အင်တာနက် ဆိုင် ဖွင ့် မလို ့ဗျ..
အဲဒါက ipstar ကိုပြောတာလားဗျ။
အဲဒါက ipstar ့ကိုပြောတာလားဗျ။:2:
red link ဆိုတာက.....
MPT and MTP က ဟံသာဝတီ GW ကနေ ပြီး ဘယ်ကို ချိတ်တာလဲ။
ရတနာပုံက Isp ပဲလား။ india and china ကထွက်တယ်ဆိုတာ india and china နိုင်ငံတွေကနေ ထွက်တာကိုပြောတာလား ဗျ။
red link က Wimax တွေ ပေးတယ်လေ... မြရိပ်ညိုမှာ office ရှိတယ်.. သူတို့ server က Bagan now MTP မှာဘဲထိုင်တယ်.. seperate မဖြစ်သေးဘူး... ဟံသာ၀တီ gateway က ဖျာပုံ ရေအောက် fiber ကနေ ထွက်တယ်.. ရာတနာပုံက Gateway သဘောပါဘဲ..
ဟံသာ၀တီ national gateway လိုပေါ့..india and china က ထွက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်.
fiber line connect with india and china... ဖျာပုံ ကထွက်တဲ့ကောင်က singapore မှာဆုံးတယ်..
မသိဘူးနော် .... ဖော်နေတာ....:d:d:d:d
mz က စည်သူအောင် ဆိုတဲ့တစ်ယောက်ဆီမှာတော့ ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတော့သဲ့သဲ့လေးကြားမိသားဗျ:p
mpt and mtp ကနေ မတူတဲ့ မြို့တွေက cyber cafe တွေ၊ internet assess တွေကို ဘယ်လို ခွဲပေးတာလဲဗျ။
ကျနော် လည်းဖောကြည့်မယ်....ကျနော်တို့ shop တွေမှာ မေးကြည့် တာ MPT တောင် india MPT တို့ myanmar MPT Line တွေဘာကွာလဲ........ခင်ဗျား....:D
မေးတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုမေးနိုင်ကြတယ်နော်..ကျွန်တော် Bagan net ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်..ဒါမှမဟုတ်
အဲလို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးလို့ ရတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြူပြီးပေးပါဗျာ။
MTP က ygn and mdy ဘဲ ရတယ်.. MPT က အားလုံးကိုပေးတယ်..နယ်မြို့တွေအားလုံး MPT ကပေးတာပါ.. IPStar ဆိုရင်တော့ MPT and MTP ရောအားလုံးပေးပါတယ်... MTP ကတော့ ကိုယ်ယူထားတဲ့ plan ပေါ်မူတည်ပြီး Download size ကို ပိုက်ဆံကောက်တယ်.. MPT ကတော့ unlimited download ပါ....
Indian MPT က Indian က လာဆင်ထားတဲ့ fiber and server ကနေထွက်တာပါ.. log in ၀င်ရင် user name and password တောင်းတဲ့ဟာပါ... myanmar MPT line တော့ မဟုတ်ဘူး. အဲဒါက korea line ပါ.. korea ကထွက်တဲ့ internet line ပါ... အခု korea line ကတော့ MTP ကို ပေးလိုက်ပါပြီ.. အဲဒါကြောင့် နည်းနည်း မငြိမ် ဖြစ်သွားတာပါ.. သုံးဖူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်..
complain ဘဲ တင်လို့ရတာပါ... အဲလိုတော့ မေးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး...
ကျွန်တော်ထင်တာလေးတွေကို ၀င်ပြီးပြောကြည်မယ်နော် ကျွန်တော်သိသလောက်က မြန်မာပြည်မှာ အရင်တုန်းက အင်တာနက်ကို ၀န်ဆောင်မူပေးတာ နှစ်ခုပဲရှိတယ် MPT & BAGAN ဆိုပြီးတောပေါ့ တစ်ကယ်Main ကတော MPT ပေါ့ အခု red LINk တိုကလည်း MPT ကနေယူပြီးတောမှ ပြန်ပြီး ဖြန့်တာလိုပဲထင်တယ်။
ကျွန်တော်သိသလောက် အင်တာနက်ကို ဒီနည်းပညာတွွေ MPT ဆီကမှတဆင့် ကျွန်တော်တိုပြန်သုံးကျတာပဲ Dial-up, iPstar, ADSL , BroadBand နှင် wimax ဖြစ်မယ်(သိတယ်လူရှိရင်ပြင်ပေးပါ)
iPstar, Broadband ,wimax
ADSL & Dial-up
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် အရင်တုန်းက ဒီ service က နေရာတိုင်း မရပါဘူး ဘာလိုလည်းဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မြီုနယ် အိတ်ချိန်းရုံးတွေမှာ ADSL server စက်တွေမရှိသေးလိုပါ။ အခုတောနေရာတိုင်းရနေပါပြီး ။ တွေးကြည်ရင့်တော MPT ကနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အိတ်ချိန်းတွေကို Cable နဲ့သွားတာပါ။ ဒီနည်းပညာမှာတော ဖုန်းလိုင်းနဲ့သွားတယ်လိုတွေးကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။
သူကတော သက်ဆိုင်ရာစက်ကနေပြီး ဘာကွန်လညး်တောမသိဘူး (Thai com လား ဘာလားတောမသိဘူး MZ မှာတောရှိပါတယ် iPstar Technology ဆိုလားမသိဘူး ၀င်ပြီးမေးလိုရပါတယ်။) ဂြိုလ်တုကိုသွားပြီး မှာ တိုးကြောင်လေး မြေပြင်ေ၀ဟင်ဆက်သွယ်ရေးစခန်းက တဆင့်သုံးရတောပေါ့။
ဒါကတော အရင်တုန်းကသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြမယ် သူက wimax လိုပဲ အရင်တုန်းကတော့ Bagan က ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာ ၂ ခုမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တစ်ခုကတော Trader Hotel အပေါ်မှာနဲ့ နောက်တစ်ခုက ရွေဂုံတိုင်မှာလိုကြားပါတယ်(ဒီတစ်ခုကဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ် ရှေ့တစ်ခုကတောကျိန်းသေတယ်) အဲဒီကနေမှတစ်ဆင်ဆိုင်ရာ outdoor receiver တွေဆီကို လွင့်ပေးတာပါ။
ဒင်းကတောကျုပ်လည်းတစ်ခါမှကိုမသုံးဖူးသေးဘူး သိတယ်လူရှိရင် ၀ိုင်းပြောကြပေါ့။ :D:D:D
ဒါကတော အရင်တုန်းကသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြမယ် သူက wimax လိုပဲ အရင်တုန်းကတော့ Bagan က ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အချက်အချာကျတဲ့နေရာ ၂ ခုမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တစ်ခုကတော Trader Hotel အပေါ်မှာနဲ့ နောက်တစ်ခုက ရွေဂုံတိုင်မှာလိုကြားပါတယ်(ဒီတစ်ခုကဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ် ရှေ့တစ်ခုကတောကျိန်းသေတယ်)
Broad Band လို့လူသိများတဲ့ Wireless Local Loop (WLL) စံနစ် နဲ့ WiMax ကိုလွှင့်တဲရွှေဂုံတိုင်ကနေရာဆိုတာက အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်းပေါ်က Golden Hail Tower ပေါ်ကနေလွှင့်နေတာပါ။ WiFi Project ကိုလဲအဲဒီနေရာမှာပဲလွှင့်မယ်လို့ သဲ့သဲ့ကြားမိသေးတယ်ဗျ။:D
အဲဒီ connection ပုံ တွေ ရနိုင်လားဗျ။:((:((:((:((:((:((:((:((:((
ဟုတ်ပြီ ညီလေး လိုချင်တယ်ဆိုရင် နာမည်.လိပ်စာ.မှတ်ပုံတင်နံပါတ်. အဖအမည်. အပြည့်အစုံ နဲ့ MPT or MTP မှာ သွားတောင်းလိုက်ပါညီလေး...
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကို လိုက်တောင်းနေတော့ အပိုဘဲညီလေးရာ... သိချင်ရင်တော့ ညီလေး အခုသိသလောက် knowledge နဲ့ လိုက်စမ်းကြည့်ပါ.. ဘာလုပ်ဖို့ အဲဒါတွေ မေးနေတာလဲ ဟင်.. အကို မသိလို့မေးကြည့်တာပါ.. ညီလေးက သိချင်တာမဟုတ််တော့ဘူး.. ဒါက security ပိုင်းကို ရောက်နေပြီး ဆိုတာ ညီလေးသိလား.... electronic ပုဒ်မ ဆိုတာ အလကား မဟုတ်ဘူးနော်....ငါ့ညီ...:1::1::1:
ခလေးကို ခြောက်နေတယ်နော် ... လူဇိုးဂျီး ... :P:P
အလကားစတာပါဗျာ ... အဲဒီ Network ပုံကြမ်းတွေလိုချင်နေတဲ့ညီလေး .... မြန်မာနက်ေ၀ါ့ခ် ပုံကြမ်းကတော့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူ ... ဒါပေမဲ့ ... တခြား ပုံကြမ်းတွေလိုချင်ရင်တော့
Google Image --- http://www.google.com/images မှာ Network Design လို့ရိုက်ပြီးရှာ ... အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်။
ကျနော်တောင် ဒီ Thread ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးပေါက်လို့ သွားရှာပြီး ကြိုက်တာလေးတွေကူးထားတယ် ...
ဟီးဟီး..... :d:d:d... ကျွန်တော်က ပြောပြတာပါ... ညီလေးက မေ့နေမှာ စိုးလို့...:1::1:
:65:လုပ်လိုက်လေညီလေးဘယ်လိုပုံနဲလိုချင်လည်း အကြမ်းပျင်းပုံလိုချင်ရင် ခန့်မှန်ပြီးဆွဲပေးမယ် ကိုယ်က internet LAN, Wan Design ဆွဲရတာ အရမ်း၀ါသနာပါတယ် ။ ဒါပေမယ် အခု ရောက်နေတယ် နေရာမှာ Microsoft Visio မရှိဘူး။:106:ဒါကြောင် ဘဲရီးဆောရီးတောကြီးမြိုင်လယ်ပါ ရရင် ဆွဲပြီးတင်ပေးပါမယ်။:67::67:
ဒါလေးက ကိုသက်အောင် လုပ်ထားတာပါ။
ဒီက Download လုပ်ပါ။
အဲဒီစကားတွေ ကြားရတာ ခွေးကိုက်ခံရတာထပ်နာတယ်:14:
စကားကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောစေချင်ပါတယ်။ စကားအသုံးနှုန်းက နိုင်ငံရေး နှင့် ညှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာထဲမှာ ဘယ်စကားလုံးကများ နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိသွားပါသလဲဗျာ
စကားကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောပါလို့ပြောရအောင် ကျွန်တော့စကားလုံးတွေထဲမှာရိုင်းတာများပါလို့လားဗျာ ဟိုလူဒီလူကိုခွေးနဲ့နှိုင်းတာလဲမပါပါဘူး ခွေးကိုက်ခံရတာထပ်နာတယ်လို့ပဲသုံးသွားတာပါ သေသေချာချာ သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်
စကားကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောစေချင်ပါတယ်။ စကားအသုံးနှုန်းက နိုင်ငံရေး နှင့် ညှိနေပါတယ်
ကျွန်တော်က ဘယ် isp တွေကနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ထဲကို connection တွေ ဘယ်လိုဖြန့်တယ်ဆိုတာကိုပဲသိချင်တာပါဗျာ။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ powerpoint ပါပဲဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို။
ရေးထားတာ ကြာပီထင်တယ်နော်။ အသစ်ထွက်ရင် တော်တော်ကောင်းမှာပဲ အကိုရ။ :):):):):)
WiMax ဆိုတာက သိပ်နားမလည်ဘူးဗျ။ ရှင်းပြပါဦး။:O:((:O:((